အဂတိလိုက်စားမှု မကျဆင်းရခြင်း အဓိကအကြောင်းရင်းသည် အစိုးရဌာနများ၌ အရိုးစွဲနေသော အဂတိလိုက်စ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများ မကျဆင်းရခြင်း၏ အဓိအကြောင်းရင်းသည် အစိုးရဌာနများ၌ အရိုးစွဲနေသည့် အဂတိ လိုက်စားမှုများကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဟု အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်က ပြောဆိုလိုက်သည်။ မေ ၁၃ ရက်မှစတင်ကာ လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ် ၃၃ ဦးက ဆွေးနွေး နေသည့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် နှစ် ပတ်လည် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်၍ မေ ၂ဝ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် လွှတ်တော်အစည်း အဝေး၌ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ကြည်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့စဉ် ပြောဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။
”မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသေးစားအဂတိလိုက် စားမှုများ မကျဆင်းရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်း ရင်းတစ်ခုက ရုံးဌာနများမှာ အရိုးစွဲနေတဲ့ ဌာနတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု Internal Corruption များကြောင့် ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ ကော်မရှင်ရဲ့စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များဟာလဲ အောက်ကနေအထက် ကို ပံ့ပိုးပေးမှုများကို တွေ့ရှိရသလို အောက် ခြေကအကျင့်ဖောက်ပြန်မှုကို ကျူးလွန်တဲ့အခါမှာ အထက်ကလာစစ်ဆေးတဲ့ အရာရှိကြီးများ ကိုယ်တိုင်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်စစ်ဆေး အရေးယူရမယ့်အစား ကျူးလွန်သောအပြစ် များကို ဖုံးဖိပြုပြင်ပေးခဲ့ပြီး ပေါ့လျော့အောင် လုပ်ပေးခဲ့မှုများကိုလဲ ကော်မရှင်အနေနဲ့ တွေ့ ရှိအရေးယူဖို့ လုပ်နေတာတွေရှိပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အောက်ခြေပြည်သူများအပေါ် တွင် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာစေသည့် အသေးစား အဂတိလိုက်စားမှုများ ကျဆင်းစေရန်နှင့် အစိုးရဌာနတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုများ သိသိ သာသာ ကျဆင်းစေရန် လိုအပ်နေပြီး ဦးစီး ဌာနနှင့် လုပ်ငန်းဌာန အကြီးအမှူးများပေါ် တွင် မူတည်ကြောင်းလည်း ဆိုသည်။ အဂတိ လိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်အနေ ဖြင့် အစိုးရဌာနများ၏ အဂတိလိုက်စားမှုများ နှင့်ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြနိုင် ရုံမှလွဲ၍ လုပ်ပိုင်ခွင့်များလည်းမရှိကြောင်း ပြောဆိုသည်။
”အောက်ခြေက ပြည်သူအများစုအပေါ် တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့ အသေးအဖွဲ အဂတိလိုက်စားမှုများ ကျဆင်းရေးဆိုတာက လည်း ဌာနတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုတွေ သိသိ သာသာ ကျဆင်းသွားအောင်လုပ်နိုင်မှပဲ ဖြစ် နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း လုံးမှာ သိသိသာသာလုပ်သင့်တဲ့ ဌာနတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းဟာ လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဦးစီးဌာန အကြီးအမှူးများနဲ့ လုပ်ငန်းဌာန အကြီးအမှူး များ စုစုပေါင်း ၂ဝဝ ခန့်ရဲ့အပေါ်မှာပဲ မူတည်နေပါတော့တယ်”ဟု ဦးအောင်ကြည်က ပြောသည်။
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော် မရှင်အနေဖြင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ လမှ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း နိုင်ငံအတွင်း အဂတိ လိုက်စားမှု အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့် ရေးနှင့် အကဲဖြတ်ရေးတို့အတွက် အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ အဆိုပါအဖွဲ့ သည် ချင်းပြည်နယ်မှလွဲ၍ ကျန်ရှိသည့်နေရာ အများစုတွင် အဂတိလိုက်စားမှုစစ်တမ်းများ ကို ကောက်ယူခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံသို့ တိုင်ကြားစာ ပေါင်း ၁ဝ၅၄၃ စောင် ပေးပို့လာပြီး အဆိုပါ အရေအတွက်သည် ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅ဆခန့် ပိုမိုမြင့်တက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ ရသည်။ တိုင်ကြားလာသည့် တိုင်စာများထဲမှ ၄၆ မှုသာ စုံစမ်းစစ်ဆေး တရားစွဲဆိုနိုင်ခဲ့ ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှပ်စစ်စွမ်းအားဖွံ့ ဖြိုးရေး အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန် နိုင်ငံခြားငွေလုံး??